9 Ɛnna Hiob buae sɛ: 2 “Ampa ara minim sɛ saa na ɛte.Ɛbɛyɛ dɛn na onipa desani atumi ne Onyankopɔn adi asɛm adi bem?+ 3 Sɛ ɔyɛ n’adwene sɛ ɔne no beyiyi nsɛm ano a,+Ɔrentumi mmua nsɛmmisa apem mu biako mpo. 4 Ɔyɛ koma mu nyansafo ne tumi mu ɔhoɔdenfo.+Hena na obetumi atew no so atua na asi no yiye?+ 5 Otutu mmepɔw+ bere a nnipa nhu;Otutu gu wɔ n’abufuw mu.+ 6 Ɔma asase wosow fi ne sibea,Na ne nnyinaso+ hinhim. 7 Ɔkasa kyerɛ owia, na ɛmmɔ,Na ɔkata nsoromma ani;+ 8 N’ankasa trɛw ɔsoro mu hata hɔ,+Na otiatia ɛpo asorɔkye so.+ 9 Ɔno na wayɛ Ayis nsorommakuw, Kesil nsorommakuw,Ne Kima nsorommakuw+ ne Anafo fam mpia no; 10 Wayɛ nneɛma akɛse a enni hwehwɛbea,+Ne anwonwade a enni ano.+ 11 Hwɛ! Otwa me ho a minhu no,Na ɔsen a minhu sɛ ɛyɛ ɔno.+ 12 Hwɛ! Ohwim kɔ. Na hena na obetumi asiw no kwan?Hena na ɔbɛka akyerɛ no sɛ, ‘Dɛn na woreyɛ yi?’+ 13 Onyankopɔn de, ɔrensianka n’abufuw;+Onuɔdenfo+ aboafo bɛkotow no. 14 Mene hena a mebua no!Mɛhwɛ me kasa yiye wɔ ne ho,+ 15 Na m’asɛm yɛ dɛ de, nanso merenyi ano.+Anka nea me ne no wɔ asɛm no, mɛkotow asrɛ no.+ 16 Sɛ mefrɛ no a, obegye me so anaa?+Minnye nni sɛ ɔbɛyɛ aso atie me nne; 17 Ɔno na ɔde ahum apirapira meNa wama m’akuru adɔɔso kwa.+ 18 Ɔremma minnya ahome foforo,+Efisɛ wama nea ɛyɛ yaw amee me. 19 Sɛ otumfoɔ bi wɔ ahoɔden a, ɔne no;+O sɛ anka ɔtemmufo a ɔyɛ den bi wɔ hɔ ɛ, anka ɔfrɛɛ m’asɛm! 20 Sɛ m’asɛm yɛ dɛ a, anka m’ankasa m’ano na ebebu me fɔ;Sɛ me ho nni asɛm a, anka obebu me ɔkɔntɔnkyeni. 21 Sɛ me ho nni asɛm a, anka minnim me kra;Anka mɛpo me nkwa. 22 Ade biako wɔ hɔ. Ɛno nti na mereka sɛ,‘Nea ne ho nni asɛm ne ɔdebɔneyɛfo nyinaa, ɔde wɔn reba wɔn awiei.’+ 23 Sɛ nsu yiri bu fa so kum nnipa mpofirim a,Ɔbɛserew wɔn a wodi bem no amanehunu. 24 Asase mpo, ɔde ahyɛ ɔbɔnefo nsa;+Ɔkata ɛso atemmufo anim.Sɛ ɛnyɛ saa a, ɛnde ɛyɛ hena? 25 Me nna twam ntɛm sen ommirikatufo;+Eguan kɔ, na ɛrenhu adepa. 26 Ɛsen kɔ te sɛ demmire akorow,Ne ɔkɔre a otu di akɔneaba pɛ nea obedi.+ 27 Sɛ meka sɛ, ‘Mɛma me werɛ afi me haw,+Mɛsesa m’anim+ na mayɛ hyɛnn’ a, 28 Me yaw nyinaa bɔ me hu;+Minim sɛ woremmu me bem. 29 Medi fɔ ara.Dɛn nti na ɛsɛ sɛ mebrɛ gu?+ 30 Sɛ mede sukyerɛmma nsu guare,Na mede samina+ hohoro me nsa mpo a, 31 Wode me bɛhyɛ amoa mu,Na me ho ayɛ me ntade tan. 32 Efisɛ ɔnyɛ onipa+ te sɛ me na me ne no ayiyi nsɛm ano,Anaa me ne no adi asɛm. 33 Obiara nni hɔ a obedi yɛn ntam asɛm,+Na ɔde ne nsa agu yɛn baanu so. 34 Ma onyi n’abaa mfi me so,+Na ne ho hu nso, mma ennhunahuna me. 35 Ma menkasa, mma minnsuro no,Efisɛ ɛnyɛ saa na mete wɔ me mu.